MAANHADAL: Maxay salka ku haysaa kala aragti duwanaanta xiligan ee mudada Doorashada golayaasha deegaanka? (daawo) – Radio Daljir
MAANHADAL: Maxay salka ku haysaa kala aragti duwanaanta xiligan ee mudada Doorashada golayaasha deegaanka? (daawo)
Seteembar 3, 2021 12:13 g 0
MAANHADAL | Hadalhayn badan ayaa ka dhalatay tallo soojeedin ku saabsan in dib loodhigo wakhtiga la qabanayo Doorashada Hordhaca ah ee golayaasha deegaanka sadexda degmo ee kala ah Eyl, Ufayn iyo Qardho, taasoo ay soo jeediyeen sideed Urur siyaasadeed oo 28 AUG 2021 ku shiray magaalada Garoowe.
Daneeyaasha Barnaamijka Dimuqraadiyeynta Puntland ayaa siweyn uga soo horjeestey in dib loodhigo wakhtiga loo asteeyey qabsoomida Doorashada Golaha Deegaanka ee Sadex Degmo, Warsaxaafadeedyo ka soobaxay Ururada Bulshada Rayidka ah iyo dhinacyo kale ayaa lagu sheegay in dib dhac ku yimaada Doorashada ay halis ku tahay hirgalka hiigsiga Doorasho dadweyne oo Puntland ka dhacda.
Shir ay isugu yimaadeen Gudiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland, Ururada Siyaasada iyo daneeyayaasha kale ee Arimaha Doorashada ayaa 30 kii bisha lagu qabtay Garoowe, waxaana Gudiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland diideen talo soojeedinta Ururada Siyaasada ka timi, Gudiga ayaa sheegay in Doorashada golaha deegaanku ku qabsoomi doonto wakhtigii loogu talagalay.
Balse weli waxaa jirta tabasho ay qabaan Qaar kamid ah Ururada Siyaasadda Puntland, Hadaba maxay Salka ku haysaa kala Aragti duwanaanta xiligan ee mudada Doorashada golayaasha deegaanka? Waa maxay caqabada Ururadu ka cabanayaan? Muxuuse ku salaysan yahay Walaaca Daneeyayaasha Dimuqraadiyeynta Puntland hadii Doorashadu wakhtigeeda ka dib dhacdo?
Waa Mowduuca Barnaamijka Maanhadal ee Jimcahan oo ay marti ku yihiin masuuliyin ka socda dhinacyada kala duwan ee Arimaha Doorashada ku lug leh.
Daljir & BBCMA: BARAARUGGA Haweenka | (Taxanaha 88aad (dhegayso)